Fikambanana – Ecar Sainte Anne Anjomakely
MPIKALO – Fikambanan’ny mpikabary katolika eto Madagasikara
="alignleft" width="272"] Mpikalo[/caption] Ny mpikalo na Fikambanan'ny mpikabary katolika eto Madagasikara dia vaomieran’asa iray mijoro ao anatin’ny vovonana’ny olon-dehibe na VONA. Manana ny sata mifehy azy manaraka ny satan’ny diosezy…
Continuer la lecture MPIKALO – Fikambanan’ny mpikabary katolika eto Madagasikara
Eo ambany fiarovan’i Masina Maria ny Ekipan’ny Raozery eto amin’ny Paroasy Masimbavy Anne Anjomakely. Ny fiaraha-mivavaka isam-bolana any an-tranon’ny mpikambana iray no fihaonan’izy ireo. « Izay manao ny Raozery, tsy mba…
Continuer la lecture Ekipan’ny Raozery
F.I.M – Fanilo n’I Madagasikara
Ny Fikambanana Skotisma Zazavavy Malagasy Katolika eto amin’ny Paroasy Masimbavy Anne na Fanilo n’i Madagasikara dia arovan’i Masimbavy Rita. Mamolavola zazavavy vanona ho anin’ny ho avy no tanjon’ny F.I.M. Ny…
Continuer la lecture F.I.M – Fanilo n’I Madagasikara
Ny Vaomeran’ny Hetsika eto amin’ny Paroasy Mb Anne dia miara-miasa amin’ny fiangonanan. Eo ambany fiahin’i Masindahy Misely ary mikatsaka ny fampandrosoana ny Paroasy no tanjon’izy ireo. Mihaona isaka ny Alahady…
Continuer la lecture Vaomieran’ny Hetsika